Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin’Ilay mampahery ahy (Filipiana 4 :13)
Ny tanàna voalohany nitorian’ny Apostoly Paoly Filazantsara tany Eoropa dia i Filipy izay any Makedonia. Antson’Andriamanitra mivantana mihitsy moa no nandehanany tany “Mita mankety Makedonia, ka vonjeo izahay”, noho ny ny antsoantson’ny mponina tany amin’io toerana io tamin’ny alalan’ny fahitana hitan’i Paoly mivantana. Nandritry ny dia faharoa nataony no nanorenany ny Fiangonana voalohany tany Filipy (Asan'ny Apostoly 16:12-40). Taona vitsivitsy taty aoriana, satria nigadra izy, ny Apostoly Paoly dia nanoratra taratasy mahafinaritra ho azy ireo, dia ny Epistily ho an’ny Filipiana. Nisaotra azy ireo izy nohon’ny fanomezana izay nampitondrain’izy ireo an’i Epafrodito, raha tao anatin’ny ady sarotra izy. Nampahery azy ireo kosa ny Apostoly, tetsy andaniny, mba hifototra amin’ny fahatokiana an’I Jesosy Kristy, ary tsy ho voatariky ny fampianaran-diso samihafa, izay efa tafiditra sahady teo anivon’ny fiangonana kristiana.
Antsoina hoe “Epistilin’ny fifaliana” ity epistily ity satria manambara izany ny vontoatiny iray manontolo. Mifamatotra amin’ny fahatokiana tanteraka an’I Jesosy Kristy izany fifaliana izany, asan’I Kristy izay ambara ao amin’ny Filipiana 2: 6-11.
Ry Havana malala, tsy olona miadana any an-tranony na any amin’ny lapany, na any amin’ny toeram-pampianarana ambony, na ny tompon’ny tranom-barotra lehibe na ny banky, na ihany koa tompon’ny toeram-pambolena sy fiompiana midadasika, no miteny izany andinin-tSoratra Masina izany, fa olona migadra any an-tranomaizina, mandalo ady sarotra. Mahagaga ny finoana an’Andriamanitra fa manandratra ny toe-tsaina sy ny toe-panahy ho any amin’ny avo sy ny fara-tampony indrindra. Marina fa ny nofo dia malemy, ny nofo tsy manan-kery, hoy Jesosy, fa ny fanahy tafaraikitra amin’ny finoana an’i Jesosy, dia ahitana zava-mahagaga mandrakariva eo amin’ny fiainana. Eritrereto tsara anie, olona migadra any an-tranomaizina izy, nefa tsy mitsahatra mampahery ny Fiangonana izay naoriny, ary mijoro vavolombelon’ny hery ao anatiny.
Ny heriko rehetra, hoy ny Apostoly Paoly dia ao amin’Ilay mampahery ahy. Ary ny mahagaga aza, izany herin’Andriamanitra izany dia tsy hita any amin’ny matanjaka, na ny manan-karena, fa ao amin’ny ory am-panahy, sy ny mangetaheta ny fahamarinana. Ny heriko hoy ny Tompo, tanterahina amin’ny fahalemena. Tany lonaka tian’ny herin’Andriamanitra hiasàna ny tenantsika malemy sy tsy mahavita na inona na inona nefa mitoetra ho mahatoky an’Andriamanitra amin’ny ady sarotra.
Ry Havana malala, tena mitoetra amin’ny finoana tokoa ve isika amin’ny lalan-tsarotra izay diavintsika? Aoka ho fantatrao fa ireo olon’ny finoana voalazan’ny Baiboly, dia nandalo olana goavana avokoa, fa tao anatin’izany no nanehoan’Andriamanitra ny voninahiny.
Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin’Ilay mampahery ahy: afaka mahafindra tendrombohitra isika amin’ny alalan’ny finoana an’I Jesosy Kristy.
Tamin’ny taona 2009, raha mba nanana hetaheta aho hanao “vacances” tany ampitan-dranomasina, na dia tsy nanam-bola na dia ariary aza, dia notanterahin’ny Tompo izany. Nanomboka tamin’ny volana Janoary 2009 dia efa nanonofy foana aho hoe mandeha fiaramanidina. Nahagaga ihany koa fa ny teny faneva nofidiako tamin’ny Alahadin’ny Mpitandrina tamin’ny taona 2008 dia ny hoe “Mandehana ry Iraka faingam-pandeha”. Tsy nitsahatra nampanantena ny Tompo, ary dia tamin’ny fomba mahagaga fa nisy olona nataony fitaovana hahatanteraka izany. Tsy izaho no nanatona azy fa io olona io no nitady ahy, ary dia nahavariana ny asan’Andriamanitra. Tsy dia hoe nanao “vacances” ihany anefa ny dia tany fa nanao asan’Andriamanitra ihany koa. Mahagaga ny Tompo, fa asehony amin’ny olona tsy manana na dia ny ariary aza, fa afaka mahavita ny vitan’ny olona manana an-tapitrisa izy, aminy alalan’ny fahatokiana an’Andriamanitra.
Tsy amin’ny heriny anefa izany, fa avy amin’Ilay mampahery azy. Ny teny hoe mampahery raha ny teny fototra no jerena dia ahitana ny foto-teny hoe “dynamo”. Jesosy no “dynamo” mamorona hery sy hafanana mampirehitra sy mampandeha ny kristiana. Koa satria izany herin’I Jesosy izany no ato anatintsika, dia tokony ho voatafy hery isika ary hazoto sy hafana fo amin’ny zavatra rehetra, raha tsorina, ny manana ny Tompo dia tokony ho “dynamique” amin’ny zavatra rehetra, indrindra amin’ny fanompoana an’Andriamanitra. Ary avy amin’izany teny izany koa aza no niavian’ny “dynamite” na ilay fitaovana mahery vaika hanapoahana sy hanapotehana vatolampy! Koa inona ary no vatolampy be eo amin’ny fiananao na ny asanao, na ny fianaranao, na ny manaodidina anao? Tsarovy fa mahay ny zavatra rehetra ianao ao amin’Ilay mampahery anao.
Teny faneva noraisiko izany tamin’ny Alahadin’ny Mpitandrina 2010 teo ary hampiasaina indray amin’izao taom-piasàna 2011 izao. Hampiasaina ho an’ny Tompo, eo ambany fitarihany sy fampaherezany araka izany, ny fahaizana sy ny fahalalàna rehetra, entina hampandrosoana ny asany. Vokatr’izany sahady izao asa fitoriana amin’ny alalan’ny bokikely na gazety izao satria, mila izany ny kristiana namana. Dia mandehàna ianao, ka mba manaova toy izany koa!